Kaody Iadiana Amin’ny Fanorisorenana Tovovavy Ao Kosovo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Marsa 2016 6:08 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, عربي, 繁體中文, 简体中文, English
Rita Parashumti manavatsava an'i Pristina manao mitovy amin'ny lahatsary “Folo ora hamakivakian'ny Vehivavy an'i New York City” lahatsary ho an'ny Alaivo Indray ny Alina ao Prishtina. Sary: Kosova WomensNetwork/YouTube
Ity lahatsoratra nosoratan'i Nate Tabak ho an'ny The World ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 24 Febroary 2016, ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Manana tantara mampihoro-koditra momba ny fandehanana eny an-dalamben'i Kosovo amin'ny maha-vehivavy azy ilay mpianatra ho mpitsabo antsoina hoe Rita Parashumti. Nitranga ny iray anisan'ny niavaka raha niaraka tamin'ny reniny tao Prishtina, renivohitr'i Kosovo izy.
“Nisy lehilahy bebe taona nilaza zavatra maherisetra tanteraka tamiko – toy ny hoe:” Te hihinana ny zavatrao aho “, hoy i Parashumti, 23 taona mahatsiahy.” Tsapako ho tena menatra aho teo anoloan'ny ny reniko. “
Tsy mba mitory amin'ny tranga tahaka izany ny vehivavy sy ny tovovavy ao Kosovo, fa tafahoatra ny fisian'izany. Saingy manantena hanova izany ny fampiharana finday vaovao antsoina hoe Ec Shlirë — Mandehana An-kalalahana amin'ny teny Albaniana.
Aingam-panahy nalaina tamin'ny Hollaback, hetsika Amerikana mitatitra ny fanorisorenana an-dalambe ny Ec Shlirë, izay natomboka tamin'ny Alakamisy. Ahafahan'ireo mpiserasera mitatitra miafina izay tranga fanorisorenana ara-nofo amin'ny endriny rehetra ilay fampiharana Kôsôvara. Hasongadina amin'ny sarintany ifarimbonana ny tatitra ary halefa any amin'ny manampahefana.
Na dia tsy ho fantatra aza ilay olona mahavanon-doza, ahafahan'ireo Kosovara mahita avy hatrany ny tena halehiben'ny fanorisorenana ara-nofo ny tahiry voaangon'ny fampiharana ary hanery ny manampahefana handray andraikitra.
“Ao Kosovo, marobe amin’ ireo vehivavy iharan'ny fanorisorenana no tsy mitory izany mivantana any amin'ny polisy, satria tsy mandray ny tranga tokana momba ny fanorisorenana eny an-dalambe ho toy ny zava-dehibe ny polisy”, hoy ilay programera, Albana Dulaj. “Raha manana tatitra maromaro kokoa isika, mino aho fa handray izany ho zava-dehibe kokoa amin'izay izy ireo.”
Ahafahan'ireo mpiserasera hitatitra miafina ireo tranga fanorisorenana ara-nofo ao Kosovo ny fampiharana ho avy tsy ela, Ec Shlire, na Mandehana An-kalalahana. Sary: Nate Tabak
Anisan'ireo tovovavy 30 nanangana ny fampiharana tao anatin'ny vondrona antsoina hoe Girls Coding Kosova i Dulaj.
Manampy amin'ny famahana ny olana hafa ao Kosovo ihany koa ny fananganana ny Ec Shlirë: dia ny tsy fisian'ny vehivavy eo amin'ny indostrian'ny teknolojia. Olana manerana izao tontolo izy io, saingy ao Kosovo manampy trotraka izany ny tsy fisian'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa. Vehivavy iray monja amin'ny 10 no manana asa ary ny iray hafa ao anatin'ny 10 no mitady asa, araka ny fikarohana nataon'ny Demokrasia ho amin'ny Fampivoarana.
Miezaka manova izany i Blerta Thaci, programera mitarika ny Girls Coding Kosova amin'ny alalan'ny fanomezana traikefa bebe kokoa amin'ny famoronana kaody (coding) ho an'ny tovovavy.
“Nihevitra izy ireo fa zavatra tsy azon'izy ireo atao izany satria natokana ho an'ny ankizilahy ihany na zavatra tahaka izany, saingy ny mifanohitra amin'izany no izy,” hoy i Thaci.
Ary ho an'ireo vehivavy nanao ny Ec Shlirë, tena manokana tanteraka ny tetikasa.
“Mitranga ny [Fanorisorenana]. Mitranga isan'andro izany”, hoy i Kaltrina Murseli, programera 23 taona. “Mitranga amin'ny rahavavinao, ny reninao, ny zanakao vavy, amin'ny olona rehetra.”
Araka ny tatitra vaovao navoakan'ny Tambajotram-behivavy ao Kosovo, dia 4,1 isanjato monja amin'ireo Kosovara no nitory tamin'ny resaka fanorisorenana ara-nofo na efa nandre olon-kafa nanao izany. Miatrika lalàna manjavozavo sy fanavakavahana ataon'ny polisy sy ny mpampanoa lalàna ireo izay mba mitatitra fanorisorenana.
Raha ahitana bokotra vonjimaika hiantsoana polisy ny fampiharana, dia tsy mihevitra izany ho asany voalohany ireo mpamorona ny fampiharana. Mijery ny fiantraikany bebe kokoa avy amin'ny fiovan'ny toe-tsaina izy ireo.
Tamin ‘ny farany, nilaza ilay programera Vjosa Preniqi fa hahatonga ireo lehilahy hieritreritra indroa alohan'ny hanorisorenana olona ny fampiharana, “Ary afaka manatsoaka lesona avy amin'izany ihany koa ny vehivavy. Satria tsy tokony hanohana an-dry zalahy ireo izy ka hanao hoe:’ Tsinotsinona ny fanorisorenana, fa zavatra mahazatra”.
Nankasitraka ny fahatongavan'i Ec Shlirë i Parashumti, mpianatra ho mpitsabo. Tohin'ny ny resaka natombony momba ny fanorisorenana an-dalambe any Kosovo izy io.
Nilalao tamin'ny lahatsary nandritra ny hetsika Take Back the Night “Misintona indray indray ny Alina” tao Kosovo izy tamin'ny taona 2014. Nandany adiny valo manavatsava an-tongotra an'i Prishtina i Parashumti no sady nalaina horonantsary miafina. Aingam-panahy avy amin'ny lahatsary malaza “Ora 10 hamakivakian'ny Vehivavy an'i NYC” izany.
“Sambany aho faly raha nisy olona nilaza zavatra,” hoy i Parashumti. “Nieritreritra aho hoe oaa. Nahavita nanatontosa ny horonantsary izahay. “
Ahitana lehilahy iray misioka sy mitabataba fanehoan-kevitra vetaveta aminy ao amin'ny lahatsary Kosovo. Ny fotoana ratsy indrindra, hoy izy, dia tamin'izy narahan'ireo tovolahy roa nandritra ny valo minitra katroka. Niaina tranga fanorisorenana maherin'ny 50 i Parashumti nandritra ny adiny valo.
Nahasarika ny sain'ny maro izany ary nitondra mibaribary ny olan'ny fanorisorenana tamin ‘ny fomba tsy mbola nisy hatrizay tao Kosovo. Nilaza i Parashumti fa mbola lava ny lalana hodiavin'i Kosovo saingy mizotra amin'ny lalana mahitsy izy raha ny fanorisorenana an-dalambe no resahana.
“Nihevitra aho fa mila taona marobe ny fanovana izany. Saingy mihevitra aho ankehitriny fa mety ho azo atao tsara kokoa ao anatin'ny fotoana fohy kokoa izany indrindra fa fantatro ankehitriny fa maro be ny olona te hanova izany toe-javatra izany, “hoy i Parashumti.
Nandray anjara tamin'ny fanaovana tatitra i Hana Marku.